Eskisehir Ankara Ogologo Ugo Trakini Ego na Ndokwa | RayHaber
12 / 07 / 2019 06 Ankara, 26 Eskisehir, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Turkey
TCDD Ụgbọ njem na-enye gị ohere iji oge dị n'etiti obodo ukwu na ụgbọ elu dị elu. Eskişehir na Ankara, nke dị n'agbata obodo ndị a, jiri ụgbọ okporo ígwè dị elu na-arụsi ọrụ ike, karịsịa ebe ọ bụ na e nwere obodo ukwu abụọ ma nwee ọnụ ọgụgụ buru ibu. N'ileba anya n'ikike nke umu akwukwo Eskişehir na Ankara, usoro ihe a bara uru na nchekwa oge maka umu akwukwo. Eskişehir-Ankara High Speed ​​Train Nke a bụ otu n'ime nkwụsị na Eskişehir-İstanbul-Ankara Line. N'ozuzu, ọ ga-ekwe omume na ndị njem ga-eme njem njem 5 na mpaghara a. Eskisehir-Ankara High Speed ​​Train line, nke bụ otu n'ime ụgbọ elu 6, na-eme njem 13 kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ na oge a dị mkpụmkpụ, ọ dịghị nri ụgbọala dị na ya. Ebe ọ bụ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè nọ n'obodo ahụ, oge a na-enye ndị njem ahụ ihe dị irè. Ị nwere ike ịbanye ụgbọ ala obodo na ihe ndị ọzọ. ndị njem nwere ike ịfefe ebe ha na-aga site na njem. Njem ahụ na-ewe nkezi nke 1,5 awa.
A na-atụle ụdị mkpa dị iche iche nke ndị njem nọ n'ụgbọ okporo ígwè ahụ ma jiri ya mee ka onye ọ bụla nwere ụgbọ ala ndị njem nwere ụkpụrụ dị iche. Ụgbọ okporo ígwè ahụ gụnyere Pulman Business na Pulman Economy oche. Ndị njem nwere ike ịzụta tiketi nke ụdị ọ bụla n'Ịntanet. Site na TCDD Transportation, ndị otu n'ime ụlọ ọrụ TCDD Transportation na-enyefe gị, ị nwere ike ịhọrọ ụdị ụgbọala gị n'ịntanetị, chọpụta ọnọdụ gị ma mezue usoro ịzụta tiketi gị site n'ịkwụ ụgwọ ụgwọ gị, n'agbanyeghị oge na ebe.
Kedu oge awa ole na ole site n'iji ụkwụ ọsọ ọsọ si Eskişehir To Ankara?
Ụgbọ okporo ígwè nke si Eskişehir na Ankara na-ewe oge elekere 1,5 n'etiti Eskişehir na Ankara. Ụgbọ ala ahụ na-amalite njem mbụ ya site na Eskişehir na 06.20 wee malite njem njem ikpeazụ na 21.10. N'okpuru ebe a bụ tebụl zuru ezu maka oge ịpụ ụgbọ okporo ígwè.
Mba Eskşhr Kalkış Polatli ACCESS Ankara abịa oge
Eskisehir-Ankara High Speed ​​Train tiketi Ahịa
A na-ekekọrịta ego tiketi tiketi Eskişehir-Ankara YHT abụọ dị ka tiketi ọkọlọtọ na tiketi mgbanwe. Ndị njem nwere ike ịzụta tiketi site na ụgbọ ala ọ bụla. N'otu oge ahụ, dị ka afọ na ọrụ ndị ọrụ nke ndị njem, TCDD Transportation na-enye ego na tiketi ha. Ndị njem na-akwụ 43,50 TL maka Pulman Business na 30 TL maka tiketi akụ na ụba Pulman.
Eskişehir-Ankara High Speed ​​Train tiketi na-agbanwe dị ka ụdị ụgbọala ndị njem na-achọ ịzụta tiketi na afọ na ọrụ dị iche iche nke ha jikọtara. Ná nkezi, ọnụahịa tiketi dị iche n'etiti 24 TL na 50 TL. TCDD Ụgbọ njem na-enye ụtụ ego na-adabere na afọ na ọrụ dị iche iche dị ka ọkọlọtọ.
Ndị nwere ikike ịnweta tiketi na-agụnye ụmụaka ndị dị n'etiti 0-6, ndị agha agha na ndị ikwu nke mbụ, ụmụ amaala nwere nkwarụ, ndị na-eme egwuregwu na ndị isi obodo.
Ndị na-eto eto 20-ndị a kwụrụ ụgwọ, ndị na-eto eto bụ 13-26, ndị nkụzi nke MoNE (agụmakwụkwọ mahadum ma ọ bụ mahadum, wdg), ụmụ amaala 60-64, ndị otu na-anata akwụkwọ pịa, ndị òtù Turkish Armed Forces na roundtrip metụtara ndị na-azụta tiketi ha site n'otu ọdụ ahụ.
Ọnụ ego ego 50 na-emetụta ndị njem, ụmụ amaala karịa afọ 65, ụmụ nke 7-12, na ụmụaka nke afọ 0-6 rịọrọ.
Eskisehir-Ankara nnukwu ụgbọ oloko ụgwọ
Eskişehir-Ankara High Speed ​​Train Hour
Ingbọ oloko Dị Ukwuu - RayHaber